Mpanamboatra sy mpamatsy kamiao finday | China Mobile Led Truck Factory
JCT 22㎡ nitondra kamio bilety- ISUZU （Model ： E-YZD22） noforonin'i Jingchuan dia toeram-pivarotana doka afaka mihetsika malalaka, fampahalalana fanovana ara-potoana, paikadim-pifandraisana ary toerana. Izy io dia karazana mpampita fifandraisana amin'ny dokam-barotra vaovao izay manambatra ny doka, ny famoahana vaovao ary ny fandefasana mivantana.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, maro ny mpanjifa vahiny no maniry ny fiara fanaovana dokam-barotra mba hanana fiasa mitovy amin'ny an'ny fiara dokambarotra nalaina tamina efijery lehibe afaka mihodina sy mivalona, ​​ary tian'izy ireo hasiana chassis elektrika ihany koa ilay fiara, izay mety hifindra sy hampiroborobo na aiza na aiza
Ny kamiao fivarotana E300 namboarin'ny orinasa Taizhou Jingchuan dia miaraka amin'ny chassis Foton sy ny endrika anatiny namboarina. Ny sisin'ny kamio dia azo hitarina, ny ambony dia azo nakarina, ary ny fitaovana multimedia dia tsy voatery atao toy ny jiro, fampisehoana LED, sehatra audio, tohatra tohatra, boaty herinaratra ary dokam-barotra amin'ny kamiao.
Ny kamiaona fampisehoana E400 namboarin'ny orinasa Taizhou Jingchuan dia miaraka amin'ny chassis Foton sy ny endrika anatiny namboarina. Ny sisin'ny kamio dia azo hitarina, ny ambony dia azo nakarina, ary ny fitaovana multimedia dia tsy voatery atao toy ny jiro, fampisehoana LED, sehatra audio, tohatra tohatra, boaty herinaratra ary dokam-barotra amin'ny kamiao.
Kamiaona finday taratra finday, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Led Mobile Trailer, Mobile Led Billboard kamiao, Nentina amidy kamiao finday, Led Mobile kamio,